बूढीगण्डकी पुनः चीनलाई दिने तयारी | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर बूढीगण्डकी पुनः चीनलाई दिने तयारी
बूढीगण्डकी पुनः चीनलाई दिने तयारी
कम्पनी र मोडालिटीका सम्बन्धमा मन्त्रालयमै गुपचुप
काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना (१२०० मेवा) विकास गर्न पुनः चीनलाई नै दिने तयारी भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा आयोजना चीनको कुनै एक कम्पनीलाई दिने पहल भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो । कुन कम्पनीलाई दिन लागिएको हो भन्नेबारेमा भने स्रोतले खुलाउन चाहेन ।
यसअघि पनि विनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाट सोभैm निर्णय गरी चाइना गेजुवा ग्रूप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)लाई गतवर्षको जेठमा समझदारीपत्रमै हस्ताक्षर गरी आयोजना दिइएको थियो । यसपटक कुन प्रक्रियाबाट कुन मोडालिटीमा बनाएर दिन लागिएको हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयभित्रै स्पष्टता छैन । ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चीनलाई दिन लागिएको भन्ने कुराचाहिँ पक्का हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, कसलाई, कुन प्रक्रिया र कुन मोडालिटीमा दिन लागिएको भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म जानकारी छैन ।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित यो आयोजना राष्ट्रिय लगानीमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको हो । बहुद्देश्यीय उपयोगका हिसाबले विकास गर्ने भनिएको उक्त आयोजना राजधानीको सबैभन्दा नजीकको ठूलो आयोजना हो । यसको विकासका लागि भनेर आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ देखि नै बजेट निकासा तथा पेट्रोलियममा करलगायतको व्यवस्था गरी लागत व्यवस्थापन भइरहेको थियो ।
उक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणकै लागि मात्र हालसम्म सरकारले रू. २० अर्ब बजेट निकासा गरिसकेको छ । नागरिक, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायको लगानीमा राज्यले नै आयोजना बनाउने भनी चलाइएका चर्चाहरूले राष्ट्रिय आत्मविश्वास उच्च तहमा बढेको थियो । तर, अघिल्लोपटक सीजीजीसीलाई आयोजना सुम्पिने बेलादेखि नै प्रक्रिया मिचेर दिइएकाले फेरि पनि त्यसै नहोला भन्न सकिन्न ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाउने गरी आयोजना पुनः सरकारकै हातमा फर्काइएको भए पनि आयोजना विकासका लागि एकछेउ पनि काम भएन । यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ‘अहिले यो विषयमा कुरै नगरौं’ भनेर तर्किए । यसले पनि बूढीगण्डकीका सम्बन्धमा माथिल्लै तहबाट केही भइरहेको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भने आयोजना जसलाई दिए पनि विधिसम्मत रूपबाट दिई समयमा बन्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘देश आपैmले आयोजना विकास गर्न सक्ने÷नसक्ने सम्बन्धमा अध्ययन पुगेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘साथै कसैलाई दिने हो भने उसको पनि क्षमता पहिचान गरी कानून र विधिसम्मत ढङ्गबाट दिनुपर्छ ।’
देशको केन्द्रीय राजधानीको सबैभन्दा नजीकको यो आयोजना जति छिटो सम्पन्न भयो उति राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्छ । तर, यसमा पनि लगानी मोडल, सक्षम विकासकर्ताको छनोट तथा प्रक्रियागत प्रणालीजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन आउँछन् । देशले नै बनाउने भनेर वर्षौं थन्किनु वा कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिएर समयमै सम्पन्न भई त्यसको लाभ पनि बेलैदेखि देशले पाउनु कुन उपयुक्त हो, बहस चलाउने हो भने यो विषय विवादित नबन्न सक्छ । राजनीतिक दाउपेचमा दिने र खोस्ने, गुपचुप गर्ने र उधिन्ने गर्नुको साटो तथ्यगत आधारमा किन आयोजना कसैलाई दिन खोजिएको हो वा होइन ? हो भने किन हो ऊर्जामन्त्री एवम् मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न सके विरोधका ठाउँमा समर्थन जुट्थ्यो ।